LibreOffice 7.0.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mapfumbamwe ekugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Mukutanga kwaNyamavhuvhu, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda FreeOffice 7.0. Kwaive kuburitswa pamwe nekukosha kunatsiridzwa, pakati payo ini ndaizoratidza kuvandudzwa kwayo kuenderana neMicrosoft Office. Iyo yakazoburitsa maviri ekutanga ekugadzirisa ekugadzirisa, achiunza iyo v7.0.2 zvinopfuura zana nekugadziriswa, chimwe chinhu chakakosha kana tichifunga kuti masisitimu senge Ubuntu 130 anoshandisa iyo yechinomwe vhezheni yehofisi suite. Maawa mashoma apfuura, TDF yakaita kuvhurwa kwacho kuve pamutemo de LibreOffice 7.0.3.
Iyi nyowani yakarukwa yakasvika yasvika nezvakawanda kupfuura 90 bug fixes, pakati peavo vanotaura zvimwe zvinogumbura zvakaunzwa muv7.0.2, saka hazvisi pachena kwandiri kana taigona kutaura nezve kudzoka pano. Uye zvakare, ivo vanotaura zvakare kuti kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa uye kusagadzikana maficha zvakaunzwa, zvinovandudza rutsigiro uye kuenderana nemafomati senge ayo anoshandiswa neMicrosoft Office.
LibreOffice 7.0.3 ikozvino inowanikwa kurodha pasi
Semazuva ese, panguva ino tinofanirwa kuyeuka kuti TDF inopa zvingangoita zviviri zvingasarudzwa pahofisi yayo suite: yazvino kwazvo ndeye yakagadzirirwa isu vedu vanoda mabasa matsva ndisingafunge zvakanyanya nezve kugadzirwa. Kana isu tichida kudzikama, isu tinofanirwa kunamatira kune yakasarudzika vhezheni, inova LibreOffice 6.4.7 parizvino. Aya akateedzana haazokurudzirwe kumatimu ekugadzira kusvika munaZvita kana Ndira, panguva iyo vachaburitsa v7.0.5 yeakakurumbira emahofisi suite.
LibreOffice 7.0.3 ikozvino inogona kutorwa kubva pawebhusaiti yemunyori, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi DEB mapakeji, RPM kana iyo kodhi / mabhinari. Vashandisi vakaisa iyo vhezheni yakapihwa needu Linux kugovera vanokwanisa kukwanisa kugadzirisa mumazuva mashoma, chero bedzi isu tirikutoshandisa v7 yehofisi suite. Kana iwe uri kushandisa sisitimu senge Manjaro kana Arch Linux, kuti ushandise iyi vhezheni unofanirwa kusunungura iyo vhezheni inouya nekumira uye kumisikidza iyo kubva ku "Nyowani" chiteshi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.0.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mapfumbamwe ekugadzirisa uye kugadzirisa kunowirirana
Apple inoda yayo yekutsvaga injini uye icha bheja pairi